ကုန်း-ရေ ကုန်သွယ်ရေးစင်္ကြံက နိုင်ငံနှင့် ဒေသပေါင်း ၁၀၆ ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထား - Xinhua News Agency
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ ဦးတည်ထွက်ခွာမည့် နိုင်ငံတကာ ကုန်း-ရေ ကုန်သွယ်ရေးစင်္ကြံအသစ်၏ ကုန်း-ရေ ကုန်တင်ရထား တစ်စီး တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ချုံချင့်မြို့မှ ထွက်ခွာရန် စောင့်ဆိုင်းနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ချုံချင့်၊ ဇူလိုင် ၂၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်-စင်ကာပူ ကုန်း-ရေ ကုန်သွယ်ရေးစင်္ကြံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ နိုင်ငံနှင့် ဒေသပေါင်း ၁၀၆ ခုရှိ ဆိပ်ကမ်း ၃၀၄ ခုနှင့် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ပိုးလမ်းမ စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းနှင့် ၂၁ ရာစု ပင်လယ်ရေကြောင်း ပိုးလမ်းမတို့နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း သိရသည်။နိုင်ငံတကာ ကုန်း-ရေ ကုန်သွယ်ရေးစင်္ကြံသည် စင်ကာပူနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း ပြည်နယ်အဆင့်ဒေသများက ပူးတွဲထူထောင်ထားသော ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ဖြစ်သည်။ ချုံချင့် မြူနီစီပယ်သည် ၎င်းစင်္ကြံ၏ လည်ပတ်ရေးစင်တာလည်း ဖြစ်သည်။
ကုန်စည်များအား ပင်လယ်ရေလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိ ကမ္ဘာ့အခြားနေရာများသို့ မတင်ပို့မီ ကွမ်ရှီးကျွမ့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ Beibu ပင်လယ်ကွေ့ထံ ရထားလမ်းများ၊ အဝေးပြေးလမ်းများနှင့် ရေလမ်းကြောင်းများ အပါအဝင် နည်းလမ်းများစွာမှတစ်ဆင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ စင်္ကြံသည် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း ပြည်နယ်များနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများအတွက် အရှေ့ပိုင်း ကမ်းရိုးတန်းမှတစ်ဆင့် ကုန်စည်များ ပို့ဆောင်ခြင်းထက် ပိုမိုမြန်ဆန်သော လမ်းကြောင်း ဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လအထိ ၎င်းစင်္ကြံ၏ ကုန်း-ရေ ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း၏ ပြည်တွင်းကဏ္ဍသည် ကုန်စည် ၄၇,၈၈၀ twenty-foot equivalent units ပို့ဆောင်ခဲ့ရာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက် ၁၄၇ ရာခိုင်နှုန်း အထင်အရှား မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း စင်္ကြံ၏ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် လည်ပတ်ရေးစင်တာမှ အချက်အလက်အရ သိရသည်။
ပထမနှစ် နှစ်ဝက်တွင် ကုန်း-ရေ ကုန်တင်ရထားများသည် ချုံချင့်မြို့မှ ခရီးစဉ်ပေါင်း ၉၅၂ ခု ပြေးဆွဲခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက် ၁၄၇ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
#China, #Land_Sea, #TradeCorridor, #Chongqing, #Xinhua, #Myanmar, #XinhuaMyanmar, #တရုတ်, #ကုန်း_ပင်လယ်, #ကုန်သွယ်ရေးစင်္ကြံ, #ချုံချင့်, #ဆင်ဟွာ
CHONGQING, July 21 (Xinhua) — A China-Singapore land-sea trade corridor has expanded its reach to 304 ports in 106 countries and regions worldwide, better connecting the Silk Road Economic Belt and the 21st-Century Maritime Silk Road.
From January to June, the corridor’s domestic section of the land-sea freight route transported 47,880 twenty-foot equivalent units of cargo,anotable year-on-year increase of 147 percent, according to data from the corridor’s logistics and operating center.
In the first half of the year, land-sea freight trains departing from Chongqing made 952 trips, surging 147 percent year on year. Enditem
Photo: The land-sea freight train of the New International Land-Sea Trade Corridor heading for Indonesia waits to depart in southwest China’s Chongqing, April 26, 2019. (Xinhua/Liu Chan)